Oppo Reno 3 sy Reno 3 Pro dia aseho amin'ny fomba ofisialy | Androidsis
Oppo Reno 3 sy Reno 3 Pro dia aseho amin'ny fomba ofisialy
daniplay | | Finday
Vao nanambara ny laharana Reno 3 i Oppo miaraka amin'ny fitaovana roa izay ho tonga any Chine amin'ny volana Janoary. Ny mpanamboatra telefaona dia mikasa ny handrakotra karazana fizarana roa ary hiady amin'ireo orinasa lehibe miaraka amina karazany roa handinika ny zavatra rehetra atolotray.
Oppo Reno 3 sy Oppo Reno 3 Pro dia manana fifandraisana 5G, ny voalohany mampiditra chipset hafa, ny voalohany mampiasa Mediatek's Dimensity 1000L avy amin'ny Snapdragon 765G an'ny faharoa. Ny orinasa Dongguan dia te hanana ampahany betsaka amin'ny findainy amin'ny alàlan'ny fananana laza be toa ny Oppo N1 niaraka tamin'i CyanogenMod.
1 Oppo Reno3 Pro
3 Oppo reno 3
Ny Reno 3 Pro dia manana tontonana 6.5 ″ OLED Miaraka amin'ny tahan'ny fanavaozana 90Hz, ny fampiratiana dia misy taham-pandrefesana mikasika ny 180Hz ho an'ny lag kely sy fanatsarana ny filalaovana lalao. Izy io koa dia miaraka amin'ny fandrakofana 100% DCI-P3 sy ny fanohanana HDR10 +.
Ny kinova Pro dia miaraka amin'ny zoom zoom 5x, optika 2x izy, ny ambiny dia ataony nomerika. Misy fakan-tsary efatra ao aoriana: fakan-tsary 8 megapixel ultra wide + fakantsary 48 megapixel izay lehibe indrindra + fakan-tsary mainty sy fotsy 2 megapixel miaraka amina solomaso telephoto 13 megapixel. Misy fakan-tsary eo anoloana eo amin'ny zoro ambony havia, fantatra amin'ny fakan-tsary selfie 32 megapixel.
Reno 3 Pro dia mametraka batterie 4.025 mAh miaraka amin'ny fanohanan'ny VOOC 4.0 30W. Aloavy ny 0% ka hatramin'ny 50% ao anatin'ny 20 minitra ary ny 0% ka hatramin'ny 70% ao anatin'ny 30 minitra fotsiny. Nasongadin'i Oppo fa haharitra amin'ny fampiasana tambajotra 5G ny bateria, toy ny hoe manapa-kevitra ny hampiasa ny tambajotra 4G ny mpampiasa satria mbola ampiasaina any Shina.
Ny teboka tsara momba ny telefaona dia izany misy ColorOS 7 ho sosona ambony amin'ny rafitra Android 10, mpandahateny stereo, WiFi, Bluetooth ary fifandraisana hafa avy amin'ny iray amin'ireo telefaona tsara indrindra amin'ny marika aziatika hatrizay.
Izy io dia atolotra amin'ny loko efatra: fotsy, mainty, manga misy kintana ary miposaka ny masoandro, ny Oppo Reno 3 Pro dia manana kinova fototra misy RAM 8 GB sy fitehirizana 128 GB ho an'ny 515 euro amin'ny fanovana, miditra alohan'ny filaharana amin'ny 31st manomboka amin'ny Desambra. Ny andiany 12GB / 256GB dia mitentina 580 euro ary ho tonga amin'ny 10 Janoary.
Ny safidy fahatelo Oppo Reno 3 Pro Pantone 2020 no anarany ary tonga amin'ny loko manga mahazatra, ny lokon'ny 2020. Tonga ao anaty boaty izay misy ny fotsy sy manga ny zava-drehetra, ao anatin'izany ny charger VOOC, tariby mametaka ary casing fotsy. Ny vidin'ity telefaona ity misy RAM 8 GB sy fitehirizana 128 GB dia 540 euro.
Ny Reno 3 dia miaraka amin'ny efijery 6.5 ″ OLED ihany, eto dia tsy misy mahasamihafa azy afa-tsy amin'ny antsipiriany momba ny fitaovana kely, na dia misy zavatra maromaro aza tokony hikajiana an'ity fitaovana ity avy amin'ny mpanamboatra satria amin'ny vidiny ambany sy mifanaraka amin'ny zavatra rehetra izy io. karazana mpihaino.
Misy fiovana any aoriana: ny Reno 3 dia manana sensor lehibe 64-megapixel, sensor 8-megapixel ultra-wide sensor, sensor mainty sy fotsy ary fakantsary fakantsary. Ny fakantsary selfie dia 32 megapixels, mitovy amin'ilay iray amin'ny kinova Pro, na dia tsy manana solomaso telefaona aza izy.
Mediatek Dimensity 1000L puce dia tonga miaraka amin'ny core efatra Cortex-A77 ary core efatra Cortex-A55 ao amin'ny CPU, raha ny GPU kosa dia Mali-G77 fanta-daza. Antsoina hoe "SoC 5G haingana indrindra" ny mpamokatra satria afaka mahatratra hatramin'ny 4.7 Gbps ary manohana ny tambajotram-pifandraisana 2G ka hatramin'ny 5G. Nanambara i Oppo fa ny Reno 3 dia ho 20% haingana kokoa noho ny sehatra misy cotre Cortex-A76 - misy 3.0 APU manokana.
Ny Oppo Reno 3 koa dia miaraka amin'ny VOOC 4.0 mamaly haingana ny bateria 4.025 mAh. Ny scanner an'ny dian-tànana dia eo ambanin'ny efijery ary ny interface user dia ColorOS 7 ihany koa.
Ho hita amin'ny loko White, Black, Starry Blue, ary Sunrise izy io. Oppo dia handefa ny Reno 3 amin'ny 31 desambra ho an'ny 440 euro amin'ny safidy 8 GB / 128 GB na 475 euro ho an'ny safidy 12 GB / 128 GB.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Oppo Reno 3 sy Reno 3 Pro dia aseho amin'ny fomba ofisialy
LG V60 ThinQ 5G havoaka amin'ny MWC 2020
ByteDance dia handinika ny hivarotana TikTok satria manohitra ny fampiasana azy i Etazonia